Home Wararka Muwaadin kale oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Muwaadin kale oo Soomaali ah oo lagu dilay dalka Koonfur Afrika
Sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika koox hubeysan oo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa habeenkii xalay aheyd waxaa ay Muwaadin Soomaaliyeed ku dileen Magaalada Cape-Town ee dalkaas, waxaana falkaas laga helayaa warar dheeraad ah.
Marxuubka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray Allaha u naxariistee Maxamed Cabdullaahi oo loo yaqaanay (Big show) ayaa waxaa uu ka dhacay deegaanka Khayelitsha ee Cape-Town ee Koonfur Afrika. Muwaadiniin kale oo Soomaali ah, isla markaana goobo Ganacsi ku lahaa aaga uu falku ka dhacay ayaa teagy gooba, iyagoona qaaday Meydka Marxuum Maxamed Cabdullaahi, waxaana halkaas durbo ka baxsaday raggii ka dambeeyay dilka.
Dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa Booliska ee Koonfur Afrika ayaa gaaray goobta uu falkaasi ka dhacay, iyagoona sida caadada u aheyd sameeyay baaritaano kooban oo wax natiijo ah kasoo bixin, kadibna halkaas isaga tegay. Degaanka Khayelitsha ee Magaalada Cape-Town ayaa ah deegan isku raran ah oo Ganacsiyo xoogan ay ku leeyihiin Ajaanibta oo ay Soomaalida kamid tahay, waxaana kuso badanaya Beegsiga lagu hayo ganacsatada yar yar ee Soomaalida ah.